बाइबलका कथाहरू: माथिल्लो तलाको कोठामा - यहोवाका साक्षीहरूको आधिकारिक वेब साइट
यो घटना दुई दिनपछि, बिहीबार रातीको हो। येशू आफ्ना १२ प्रेरितसित निस्तार चाडको भोज खान माथिल्लो तलाको यो ठूलो कोठामा भेला हुनुभएको छ। कोठाबाट निस्कदैं गरेको मान्छे यहूदा इस्करयोती हो। अब ऊ येशूलाई कसरी पक्रने भनेर पूजाहारीहरूलाई बताउन जाँदैछ।
केही दिनअघि यहूदाले पूजाहारीहरूकहाँ गएर यो प्रश्न गरेको थियो: ‘येशूलाई पक्रन मदत गरें भने तपाईंहरू मलाई के दिनुहुन्छ?’ उनीहरूले चाँदीका तीस टुक्रा दिने वचन दिन्छन्। अब येशूलाई समात्न लगाउन यहूदा ती पूजाहारीहरूलाई लिन जाँदैछ। यहूदा कति दुष्ट रहेछ!
निस्तार चाडको भोज सकिएपछि येशूले अर्को विशेष भोज सुरु गर्नुहुन्छ। उहाँ आफ्ना प्रेरितहरूलाई रोटी दिंदै यसो भन्नुहुन्छ: ‘यो खाओ किनभने तिमीहरूका निम्ति दिइएको यो मेरो शरीर हो।’ त्यसपछि उहाँले एक कचौरा दाखमद्य दिदैं यसो भन्नुहुन्छ: ‘यसलाई पिओ किनभने यो तिमीहरूको निम्ति बगेको मेरो रगत हो।’ येशूले सुरु गर्नुभएको यो भोजलाई बाइबलले ‘प्रभुको साँझको भोज’ अथवा ‘प्रभुको भोज’ भन्छ।
मिश्रमा परमेश्वरको स्वर्गदूतले इस्राएलीहरूको घरलाई ‘नाघेर’ मिश्रीहरूका परिवारका सबै जेठाहरूलाई मारेको दिनको सम्झना गर्न इस्राएलीहरू निस्तार भोज मनाउने गर्थे। तर अबदेखि येशू आफ्ना चेलाहरूले उहाँलाई अनि उहाँले उनीहरूका निम्ति कसरी जीवन दिनुभयो, त्यो सम्झेको चाहनुहुन्छ। यसैकारण उहाँ आफ्ना चेलाहरूलाई हरेक वर्ष यो विशेष भोज मनाउनू भन्नुहुन्छ।
प्रभुको साँझको भोज खाएपछि येशूले प्रेरितहरूलाई आफ्नो विश्वास बलियो बनाउनू अनि साहसी हुनू भन्नुहुन्छ। अन्तमा आफ्ना चेलाहरूसित परमेश्वरको भजन गाएपछि येशू त्यहाँबाट निस्कनुहुन्छ। उहाँहरू बाहिर निस्कँदा मध्य रात भइसकेको हुन्छ। हेरौं, उहाँहरू अब कहाँ जानुहुन्छ।
मत्ती २६:१४-३०; लूका २२:१-३९; यूहन्ना १३ देखि १७ अध्यायसम्म; १ कोरिन्थी ११:२०.
चित्रमा देखाइएझैं येशू र उहाँका १२ जना चेलाहरू किन माथिल्लो तलाको ठूलो कोठामा छन्?
कोठाबाहिर निस्कँदै गरेको मान्छे को हो र उसले के गर्न लागेको छ?
निस्तार चाडको भोज खाइसकेपछि येशूले कुन विशेष भोज सुरु गर्नुहुन्छ?
निस्तार चाडले इस्राएलीहरूलाई कुन कुराको सम्झना गराउँथ्यो? अनि यो विशेष भोजले येशूका चेलाहरूलाई कुन कुराको सम्झना गराउँछ?
प्रभुको साँझको भोज मनाइसकेपछि येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई के भन्नुहुन्छ र उनीहरू के गर्छन्?
मत्ती २६:१४-३० पढ्नुहोस्।
यहूदाले येशूलाई जानाजानी धोका दिएको हो भनेर मत्ती २६:१५ ले कसरी देखाउँछ?
येशूले बगाउनुभएको रगतले कुन दुइटा उद्देश्य पूरा गर्छ? (मत्ती २६:२७, २८; यर्मि. ३१:३१-३३; एफि. १:७; हिब्रू ९:१९, २०)
लूका २२:१-३९ पढ्नुहोस्।
कुन अर्थमा शैतान यहूदाभित्र पस्यो? (लूका २२:३; यूह. १३:२; प्रेरि. १:२४, २५)
यूहन्ना १३:१-२० पढ्नुहोस्।
यूहन्ना १३:२ अनुसार यहूदाले जे गऱ्यो, के त्यसको लागि उसलाई दोष दिन मिल्छ अनि यसबाट परमेश्वरका सेवकहरूले के सिक्न सक्छन्? (उत्प. ४:७; २ कोरि. २:११; गला. ६:१; याकू. १:१३, १४)
येशूले कस्तो सशक्त उदाहरण दिएर सिकाउनुभयो? (यूह. १३:१५; मत्ती २३:११; १ पत्रु. २:२१)
यूहन्ना १७:१-२६ पढ्नुहोस्।
येशूले कुन अर्थमा आफ्ना चेलाहरू “एक होऊन्” भनेर प्रार्थना गर्नुभयो? (यूह. १७:११, २१-२३; रोमी १३:८; १४:१९; कल. ३:१४)